अब बेरोजगारलाई काम दिन नसके भत्ता ! | जनदिशा
अब बेरोजगारलाई काम दिन नसके भत्ता !
काठमाडौं, १७ भदौ । परिवारका सबैजना सदस्य बेरोजगार भएमा सरकारले सकेसम्म काम नसके निर्वाह भत्ता दिने भएको छ । जागिर नभएकालाई सरकारले क्षमताअनुसार काम र नसकेमा बेरोजगार भत्ता दिनुपर्नेछ।
संविधानको मौलिक हकमा राखिएको रोजगारीको हकसम्बन्धी बनेको विधेयकले परिवारमा कुनै पनि सदस्य जागिरमा संलग्न भएमा निर्वाहभत्ता दिने व्यवस्था गरिएको हो । तर, कसैले पनि झुठो विवरण पेश गरेर बेरोजगार भत्ता लिन भने पाइने छैन। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
Previous Previous post: कसले बनाउने भन्ने विवादका कारण बन्न सकेन पनौती-खोपासी सडक
Next Next post: कंगनासँग बक्स अफिसमा टक्कर लिन चाहदैनन् ऋतिक, यस्तो छ कारण !